Fampisehoana an-dampihazo :: Nahaliana ny tantara « Ny Voromailala » • AoRaha
Fampisehoana an-dampihazo Nahaliana ny tantara « Ny Voromailala »
Mahavelombolo ny firoboroboan’ny teatra malagasy. Misy ny ezaka vitan’ireo mpisehatra amin’ny fanatsarana sy fampivoarana fahaiza-manao. Manampy izany ny firotsahan’ny tanora an-tsehatra, izay hita ho mihamaro tahaka an’ireo vao miditra amin’ireny tropy fanta-daza ireny. Nahitana taratra an’io fivoaran’ny teatra io ny fampisehoana an-dampihazo natao tetsy amin’ny Arena Ivandry, ny takarivan’ny zoma lasa teo. Nolalaovin’ny tropy Jeannette “Andiany fahatelo B” tao ny tantara mitondra ny lohateny hoe « Ny Voromailala », nosoratan’i Rosa Beby sy noravahan’ny hiran’ Andrianary Ratianarivo. Nahaliana ny fanarahana ny tantara niompana tamin’ny fiainana tovovavy iray teren’ny rainy hanambady ny tsy safidiny, tao anatin’ireo fizarana telo.
Nampitolagaga sady nahafa-po ny mpanatrika ny seho. Rivo-baovao noentin-dry Mbato Ravaloson, tale artistikan’ny tropy Jeannette, sady nandrindra an-tsehatra ny filalaovana ny « Ny Voromailala », ny fampiakarana ireo mpilalao tanora. Tsy nitovy tamin’ny mahazatra fa nahitana fivoarana ny fomba noentin’izy ireo namelona ny tantara. Nisongadina ny fahaizan’ireo mpisehatra nilalao. Niavaka sady hita ho nanaovana fikarohana lalina ihany koa ny rindra an-tsehatra.
Tsiahivina fa manamarika ny faha sivifolo taona nijoroany ny tropy Jeannette,tamin’ity taona ity. Marobe ireo hetsika hotanterahina ka anisan’ny havoitra ny fampahafantarana ny tantaran’ny tropy, ny mpikambana maro efa nifandimby tao… Hisy koa sehatra hizarana traikefa amin’ireo tanora liana amin’ny filalaovana teatra. Marihina fa ny piesy “Ny voromailala” no holalaovin’ ny tropy Jeannette mandritra ny fankalazana manontolo, izay tsy hifarana raha tsy amin’ny volana jona 2020.
Hay sy kolo teny Hankalazaina amin’ny fomba hafa ny « Herinandron’ny kabary »
Vazo an-gitara :: Nanokanan-dry Eric Manana fahatsiarovana manokana i Nita Rakotomanga
Fifaninanana asa soratra :: Hotiliana ireo manan-talenta amin’ny fanoratana Teny malagasy sy frantsay